Archive du 20180607
Fananganana Governemanta Tsy maintsy ifampiresahana
Tamin’ny 9 ora alina vao vita ny fihaonan’ny solontenan’ny depiote ho an’ny fanovana sy ny praiminisitra Ntsay Christian teny amin’ny lapan’ny Mahazoarivo omaly.
Praiminisitry ny Repoblika faha-4 Niteraka savorovoro hatrany
Repoblika faha-4, in’efatra nisolo praiminisitra tao anatin’ny 4 taona. Izay raha fintinina ny repoblika notarihin’i Hery Rajaonarimampianina hatreto.
Ravalomanana sy Rajoelina Misy paikady avo lenta hanilihana azy ireo ?
Ho maromaro ihany ny tsy ampoizina na « surprise » hitranga ato anatin’izao andron’ny lazaina ho « marimaritra iraisana » izao raha ny fipoitrany nanomboka ny alatsinainy teo.
Christian Ntsay “Laharam-pahamehana ny fifidianana”
Tontosa omaly alarobia 06 jona 2018 teny Mahazoarivo ny fifamindram-pahefana teo amin’ny praiminisitra teo aloha, Mahafaly Olivier Solonandrasana sy ny vaovao, Christian Ntsay.
Fivoaran’ny toe-draharaham-pirenena Tsy mahafa-po ny mpanao politika
Na dia voatendry sy nahavita ny fifamindra-pahefana teny Mahazoarivo omaly aza ny praiminisitra vaovao, Christian Ntsay, dia maro ireo mpanao politika sy mpandinika politika mahita fa tsy misy fiovana mitaha amin’ny fomba fanao teo aloha ihany ny zava-misy.
Fifidianana madio Sarotra hinoana hatreto
Iray amin’ireo didin’ny Fitsarana Avo momba ny lalàmpanorenana ny fanatanterahana fifidianana mialoha ny fotoana. Ny tolo-kevitry ny Vaomiera mpikarakara ny fifidianana na ny CENI, dia ny 28 aogositra no hatao.
Fifidianana Miomana ny KMMR Antananarivo
Manomana fatratra ny fomba hamerenana ny filoha Marc Ravalomanana eo amin’ny fitondrana ny mpomba azy.
Minisiteran’ny tontolo iainana Fandraisana mpiasa 40 mampiahiahy
Nitrangana zavatra tsy nampoizina teo anivon’ny minisiteran’ny tontolo iainana tamin’ny alatsinainy lasa teo, fotoana nanaovan’ny praiminisitra teo aloha Solonandrasana Olivier fametraham-pialana.
NIDOBOKA ENY TSIAFAHY ILAY NAMONO NY VADINY
Nanaiky ny namono ny vadiny i Tahina saingy kosa tsy nety niteny hatramin’ny farany izay antony. Izay ny vaovao azo teo anivon’ny fianakavian’ny maty.
Rugby faha-35 taonan’ny 3FAI Raikitra ny famaranana fiadiana omby mifahy sy volabe
Hotanterahina amin’ny alahady 10 jona 2018 ho avy izao etsy amin’ny kianjan’i Mahamasina ireo lalao famaranana rugby à XV tafiditra amin’ny fankalazan’ny klioba 3FAI Ambalavao Isotry ny faha-35 taonany izay tokony ho notanterahina tamin’ny alahady 03 jona teo.
Marimaritra iraisana ! Fintinina ihany koa amin’ny hoe « marimaritra ». Fomba fiteny na voambolana iray izay nanamarika ny tantara sy ny fiainam-pirenena malagasy io tato anatin’ny 9 taona farany.
Antananarivo renivohitra Nodiovina ny teny amin’ny 67 ha
Mbola betsaka ireo faritra maloto eto Antananarivo Renivohitra ka ilana fanadiovana maika, ho fitandroana ny fahasalaman’ny mponina. Anisan’ny nanaovan’ireo hery velona rehetra ao amin’ny Boriborintany voalohany ezaka ny teny 67 ha sy ny manodidina, tamin’ny talata lasa teo.
Fifanakalozana ara-toekarena amin’i Afrika Mila miroborobo aloha ny orinasa eto an-toerana
Nafana ny ady hevitra nataon’ny mpahay sy mpandraharaha ara-toekarena omaly tetsy any amin’ny Hotely Carlton Anosy. Iaraha-mahita ny firosoana sy ny fihazakazahan’ny toekaren’ireo firenena nahantra niaraka tamin’i Madagasikara .
School Tournament 3X3 Zone 2 Fantatra koa ireo tafita hiatrika ny famaranana
Fantatra tamin’ny faran’ny herinandro teo tetsy amin’ny kianja ivelan’i Mahamasina ireo ekipa ao amin’ny « ZONE 2 » izay hanampy an’ireo tafita tao amin’ny « ZONE 1 » hiatrika ny dingan’ny famaranan’ny « School Tournament 3x3 hotontosaina ao amin’ny Kolejy Saint Michel Amparibe amin’ny faha-16 jona 2018 ho avy izao.
Fanafihana tany Antsirabe Olom-pantatry ry Masera ihany ireo jiolahy
Sarona ihany rehefa niriaria sy mbola nanohy ny asa ratsiny ireo nanafika ny Masera ny alin’ny 7 mey 2018 lasa teo.
Olan’ny fanjifana ao Betafo Antsirabe Miandry famahana olana malaky
Tsy mbola nahitana valiny hatreto ireo fitakiana ny famahana ny olana mianjady amin’ny mponin’i Betafo Antsirabe eo amin’ny sehatry ny fanjifana, hoy Atoa Ratiariniaina Jean Theobert na Ra-Theo Fibemih mpandrindra ny Vondrona mpiaro ny Zo sy ny tombontsoan’ny mpanjifa na Garduc Madagascar Faritra Vakinankaratra izay miasa ao Betafo. Voalohany :
Fanisana ny mponina sy ny toeram-ponenana Tsy maintsy atao hahamatotra ny asa fampandrosoana
Lany andro ny antontanisa momba ny mponina sy mahakasika ny harem-pirenena eo am-pelatanana amin`izao fotoana izao. Zava-dehibe ho an`ny firenena ny hanaovana ny fanisana handrafetana ny politika momba ny fampandrosoana, toekarena sy sosialy, eo amin`ny faritra tsirairay sy ny firenena manontolo amin`ny alalan`ny tetikasa RGPH-3.